Ngokuchasene nemvelaphi yeesekese ezimnandi, i-waffles ethobekileyo ikhangele "malunga nezihlobo ezihlwempuzekileyo". Enyanisweni, banomlando osisityebi kunye nekamva elithembisayo. Ngaloo nto ikhona-i-waffles eyona nto enomdla kakhulu, ngokuphathelele imbali yendalo kunye neendawo eziphathekayo, funda ngezantsi.
Kutheni sifuna ama-waffles? Umhlaba wabo okhethekileyo, ongeke udideke nantoni na, iselula okanye "i-honeycomb" isakhiwo, uye waba ngumqondiso wazo. Wada wanika amagama kwiintlobo zeemveliso, ngamanye amaxesha kungenakunxulumene nokupheka. Ewe, umzekelo, ithawula elitsha.
Iifama kunye namaFafesi
Konke kwaqala emva kwekhulu le-13 kunye nokuveliswa kwesinyithi sesinyithi - iiplates ezimbini zetsimbi ezixhunywe ngamathangi kwaye zinikezelwe ngezixhobo zokulungelelanisa. Omnye umthamo womlambo wawuzaliswe inhlama yamanzi, enye yavaliwe, yavutha umlilo, yaguquka, kwaye emva kwemizuzu embalwa - iifumba zikulungele. Iprototype yexesha elidlulileyo lenkqubo yayiyiplati yesinyithi yamaGrike asendulo. Babhaka kuzo zonke izonka ezithembekileyo, ezabizwa ngokuba yi-obleios.
Abanye benzi bezandla endaweni yeeseli eziqhelekileyo babenomzekelo othile-i-matrix, njenge-gingerbread: umzekelo, ngesimo seefoto ezihlukeneyo, iintsapho zeengubo zeentonga, imifanekiso yezanta okanye kwanemihlaba yonke. Ngokuqhelekileyo uhlobo lwentsimbi ye-waffle yayinxantathu, kodwa ngamanye amaxesha. (Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ifomanamhlanje ifana neyifom yexesha eliphakathi, ukuba akunjalo, ukuba kunjalo, isitya segesi. nokuba ingqondo ayikwazi ukucinga ngaphandle kwekhompyutha.)
Kakade kwinkulungwane elandelayo ubunqweno obunokuthi buya kuhlolwa kwiindawo ezidumileyo "zamaqela aphilileyo". Baqala, ngokusemthethweni, kunye ne-spitter, apho babesebenza ngamacwecwe angenasiphunga ngeeshizi kunye nokuzaliswa kwenyama - uhlobo lwee-tartlets. Kulungile, ke waya kwiindidi ezininzi zokutshisa - kunye nama-molasses, i-syrups kunye ne-jam. Kamva i-waffles yayisityukisiwe ukuze igcinwe ixesha elide. Kwaye ngowe-1964 kwintlekele eNew York yenza intetho yeebheji zaseBelgium, ebhakawa emgqumeni. Eyona nxubile kwaye ilukhuni, ibe yinto ebaluleke kakhulu kwimiboniso kunye nemigodi.
Kodwa ibali elincomekayo kakhulu lama-waffles laqala nangaphambili, emva kokuveliswa kwensimbi ensimbi. Abo bafunde isiNgesi bayazi ukuba igama elithi waffle linempawu-magama. Ngoko, akuyona into efanayo. Kwiinkulungwane ze-XIV zeenkulungwane zazahlukileyo kwaye zabizwa ngokuba yi-safer. Konke malunga novavanyo. Kwakusandul Umgubo waxutywa - kusuka kwibhali kunye ne-oats (kwaye ingabi ngqolowa, njengangoku namhlanje). Iingxowa zazingenakulungiswa. Kukho ezininzi zokupheka kwazo ngeeshizi. Kamva inhlama yaqala ukudibanisa kuqala imvubelo, kwaye i-powder baking powder efana ne-soda okanye i-ammonium salts. Ngoko ke amaqhekeza ajika ajika.
Iifama ezivela kwihlabathi lonke
Uhlobo ngalunye lweeffles zasekhaya ezihle kakhulu lunamacandelo akhethekileyo, ubuzwe bawo. E-Netherlands zibizwa ngokuba zi-fel, kunye naseFransi-gaufre, naseJamani - i-waffle. Kodwa akukona kakhulu kumagama, njengamasiko kwaye, ke, iirephepheni. Ama-waffles aseJamani amancinci, afana ne-pancake, eqinisweni-ezi zinto zindala. Ama-waffles aseBelgium (ngokuchanekileyo eBrussels) yimvubelo. Ukukhanya nokuphefumula, iiprotheni ezibethelwayo zongezwa kuzo. Namhlanje bathengiswa kwisitrato, bafafaze kakhulu nge-ushukela ophuhliweyo. Ewe, phantse njengama-donuts ethu.
Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, endaweni yekhempi ephosiweyo. I-liege yaffles nayo ivela eBelgium. Ziphekwe kwiivenkile ezincinci kwaye zithengiswa ngokukhawuleza. Iifama zincinci kunezihlobo zakwaBrussels, ezithandekayo kwaye zizinzileyo. Efihliweyo kunye noqwelo lwe-caramel kunye ne-vanilla okanye i-cinnamon flavour. Iingqungquthela zeLiege zingenziwa "zixutywe" kunye neziqhamo, ukhilimu kunye necolethi. I-Vienna waffles - ekhululekile, eninzi kwaye elula kwi-"cage" enkulu. Zifana neentlanzi - ithenda, ezithandekayo, ezizaliswe ngama-creams. Iindidi zaseMerika zilungele ngokupheka i powder. Zinyani kwaye zinzima. Isisidlo esithandayo esithandayo sekusasa. Zidliwa ngokuyininzi ngebhotela kunye nee-syrups ezahlukahlukeneyo, kwaye zihlala zongezwa kwezinye izitya, umzekelo, i-ayisikrimu kunye ne-dessert (kwaye kwangaphambili zazijoliswe kwisidlo esinomdla kakhulu - kunye neentso ezibiweyo). Iifumba ezidume kakhulu uNilla. Lona ligama le-brand (iqine elinguNabisco), ekugqibeleni liba ligama lekhaya kuzo zonke iifumba ezigcoba nge-vanilla. Kwiintlobo zentombi, esikhundleni somgubo wengqolowa, ilayisi okanye umgubo wokudla. Iiflethi ze-potato zesiNgesi zithengiswa ngamaqhwa. Ukubunjwa kwabo - iifatata zefatata, ioli kunye nemifuno yemifuno. Isiqulatho esithi "isiqwenga" siqhotyoshelweyo kubo, ukubhaka okanye ukucoca kwi-toaster kunye ne-grill. Kwiindawo zokungcebeleka zaseCzech Republic naseSlovakia, iintengiso ezikhethekileyo ze-SPA zithengiswa, okanye, njengoko zibizwa, ipelni oblatki. Iifama zibalulekile ngokukhethekileyo kumaKatolika - njengophawu lokuxolelwa abavunyelwe ukunikela ngeKrismesi.
Kukho iintlobo zeengqungquthela ze "crunches". EJapan babizwa ngokuba yi tatyaki. Zibukeka njengeentlanzi kwaye ziqulethe ukuzaliswa okucokisekileyo kwamabhontshisi omhlaba okanye i-cream cream. Kwaye iifetan zaseVietnam zenziwe kwintlama emnandi, enokuncedwa ngamagqabha akhethekileyo abhalwe ngombala obomvu. Kodwa akukho konke. Ama -afafisi ashukela, athambile, ibhasikidi, iziqhamo, igama ... oko akwenzeki nje!
Kwimarike yethu "yeeffle", yonke le ntlukwano ichazwa ngohlu olupheleleyo. Unokuthenga zombini owaziwayo kunye nentandokazi ye-brusochki kunye namaqebelengwane, kunye nemveliso emitsha ngokupheleleyo kwiifom, imiqulu, iimpondo. Inkomishi nge-ayisikrimu ayisayi kumangalisa mntu, kodwa i-horn yoboyiweyo kunye ne-dessert yangaphakathi ngaphakathi yintsikelelo yangempela yonyaka. Ngumnandi (kwaye, ngokubalulekayo, ngokukhawuleza) ukulungiselela ikhekhe eyenziwe ngokomama obisiweyo obisiweyo? Umele udibanise nebhotela kwaye usasaze iifestile ezibhekiselele kunye nobunzima obulungisiweyo. Into ephambili kwi iresiphi ukunyamezela iiyure ezimbini, de kube ikhekhe kwifriji igxinwe ngokuzaliswa, kwaye ungadli ikhekhe phambi!
Iimveliso ezigqityiweyo ezigqityiweyo - into elula kakhulu, kuba ubuso bunjengekusetyenziswe ngokukhethekileyo ukuxhamla okungcono. Ziyixande kwaye zijikeleziwe, zinkulu kwaye zincinci, zinzima kwaye zinzima. Kwaye kukulungele ukuba ngokusekelwe kuzo kusekunokwenzeka ukulungiselela into entsha kunye engavamile, okanye, ngokuchaseneyo, ukukhangela iincwadi zokudala, "khumbula okokuqala." Ukuba ufuna ukuluma kakhulu ngokukhawuleza, kunele ukuthatha i-can of cream cream, kunye kunye neziqhamo kunye namajikijolo, ngokukhawuleza ungene phakathi kweefers. Yaye ilungile, kwaye iluncedo!
Ukuba uqaphela ngokucophelela impilo yakho kwaye ukwesaba ukutya okugqithisiweyo kunye neezongezo zamakhemikhali, ngoko ke phakathi kwe-clock of delicious waffles, uzakufumana into enomdla kuwe. Ngoko, umzekelo, abavelisi abaxhasa ukutya okunempilo, nikela ngeefestile ezingaphephile nje kuphela, kodwa nokutya. Baza kuhambelana nabo bavame ukuphepha iswekile. Iifama ezinama-hazelnuts, ubusi, isiraphu yerayisi nangona ingahlambulukanga, kodwa ngokuqinisekileyo ayifaki iikhalori. Ngendlela, kungekudala, ama-waffles ashintsha umfanekiso wabo. Kusuka kwietekisi ezingabonakaliyo kwaye eziqhelekileyo ngokukhawuleza ziba yinto ecocekileyo, kwaye ezinye zinokuthi zithathwa ngabafundi. Umzekelo ocacileyo unokuqwalaselwa ukubonakala kweeffles ezibiza kakhulu kwi-confectionery. Abaxolisi baxela ukungafezeki kweprojekthi efanayo, becinga ukuba iifake ze-premium azikho kumthengi wethu. Babephutha. Ama-waffles aseDatshi avela kwizinto eziphambili zezinto ezibonakalayo sele sele efumene umthengi wabo. Nangona kunjalo akufanele ucinge ukuba ii-waffles ezibiza kuphela zinokucingwa njengekhwalithi. Ubungqina buyimveliso eqhelekileyo yeenkampani zasekhaya.
Iimfihlelo zengcamango yeendawo zokugcoba zasekhaya
Abafizi banemfihlelo yabo, kwaye eyona nto ilula: ngaphandle kwe-crunching ye-waffles-ayiyi-waffles. Iqheqhe, inqabileyo, ijikeleze okanye iyinxantathu, kunye okanye ngaphandle kokuzaliswa - iifumba zimele zihluthe. Izakhiwo zeCrispy zinikezwa ngentlama ekhethekileyo yokutya-i-porous, ekhanyayo, kufuneka ibe yomekile kwaye ibome. Ngako oko, uphawu olubaluleke kakhulu lweentsimbi ezilungele ukulungelelanisa ngumxholo wokunyumba. Kwiphepha le-waffle ngokuhambelana ne-GOST, kufuneka libe kwi-2.1-3.9%. Enyanisweni, ukuba iifakela ngokuzaliswa, eli xabiso lingahluka kakhulu. Ngokomzekelo, ukuzaliswa kwamanqatha okanye ukuxhamla, umswakama unokufikelela kuma-7-8%, kodwa iziqhamo-ukusuka ku-9 ukuya ku-15%. Iifomferensi ezinobuncwane obushushu, ngokuchasene noko, ezona ziphantsi (ukusuka kwi-0,6 ukuya ku-2,2%). Nangona kunjalo, umenzi ngamnye owenza iintsimbi unamanye amfihlelo. Sisebenzise ukuba i-wafers ezihle kakhulu ziyancwina, yingakho asiyikumangaliswa ukuba ushukela ngokuqinisekileyo lufakwe kuzo zonke iiresi, ikakhulukazi abavelisi basekhaya. Nangona kunjalo, amaqhekeza angaphandle aveliswa kwaye angenasiphelo, okubaluleke kakhulu ngoku kutshanje.
Izambatho zasekhaya zabasetyhini
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 kubafazi-uLviv
UVlad Topalov uqhawula umtshato kwintombi ye-millionaire